यसकारण लाग्छ झाडापखाला, यो रोगबाट बच्न के गर्ने ? | Ratopati
बुधबार ४ मंसिर, २०७६ Wednesday, 20 November, 2019
बिरामीलाई प्रशस्त झोलिलो कुरा खानेकुरा आवश्यक
personअञ्जु तामाङ exploreकाठमाडौं access_timeजेठ ४, २०७६ chat_bubble_outline0
काठमाडौं– मौसम परिवर्तनसँगै अहिले मौसमी रुघाखोकी र झाडापखालाको बिरामी पनि बढ्दै गइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष झाडापखालाले नेपालको कुनै न कुनै ठाउँमा माहामारीको रुप लिने गरेको छ । झाडापखाला, हैजा जस्ता सरुवा रोगबाट वर्षेनी धेरै नागरिकको ज्यानै जाने गरेको छ । यस्तै झाडापखालाको मुख्य जोखिममा बालबालिका र पर्ने गरेका छन् । झाडापखालाको कारण, उपचार र बच्ने उपायका विषयमा केन्द्रीत रहेर शुक्रराज ट्रफिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले विस्तृतमा जानकारी गराएका छन्ः
के हो झाडापखाला ?
दिनमा तीन चारपटक भन्दा बढी छिटोछिटो पातलो दिसा जानु र वाकवाकीसमेत हुनुलाई झाडापखाला वा झाडावान्ता पनि भनिन्छ ।
विशेषगरी ब्याक्टेरिया र भाइरसको संक्रमणले गर्दा झाडापखाला हुन्छ । दूषित खाना, पानी र फोहोर हातका माध्यामबाट झाडापखालाका कीटाणु फैलिन्छन् । भिब्रियो कोलेरा, जुकाहरू (हेलमेन्थ) जस्ता ब्याक्टेरियाको संक्रमणले मानिसमा झाडापखला लाग्छ । भाइरसअन्तर्गत मुख्य रूपमा रोटा भाइरसलगायत अन्य भाइरल संक्रमणले गर्दा पनि हुन्छ ।
गर्मीमा खाना छिटो बिग्रने, धुलोधुँवा, फोहोर, हुरीबतासलगायतका कारण रोगका किटाणुहरूले मानिसमा यस्ता रोगहरू सार्ने गर्दछन् ।
डा वासुदेव पाण्डे : फोटो/ सुवास श्रेष्ठ
एकदेखि दुई पटक दिसा हुँदा समान्य अवस्था मानिन्छ । दिसामा चिप्लो पदार्थ सिगान जस्तै मिसिएको छ अथाव पानी÷पानी मात्रै छ भने झाडापखाला लागेको भनेर बुझन् सकिन्छ । दिसाबाट पानी मात्रै गएको छ भने भाइरलको कारणले झाडापखाला लागेको बुझ्न सकिन्छ । यस्तै रगतमासी मिसिएको दिसा भयो भने अमिबा भएको बुझ्नु पर्दछ । दिशाबाट रगत÷रगत मात्रै भयो भने ब्याक्टेरियाको कारण भएको बुझ्नु पर्दछ । दिशा गर्दा सेतो पानी धेरै आएको खण्डमा भने हैजा भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । हैजाले धेरै पटक पखाला लाग्ने र शरीरमा तुरुन्तै शुख्खापन हुने समस्या हुन्छ । साथै जिब्रो सुक्ने र जिब्रो चाउरी पर्ने समस्या हैजाबाट हुन्छ ।
बारम्बार पातलो दिसा हुनु, दिसामा सिँगानजस्तो चिप्लो पदार्थ तथा रगत आउनु, शरीर शिथिल हुनु, आँखा गाडिने—मुख सुक्ने, बढी मात्रामा तिर्खा लाग्ने, कमजोर एवम् बेहोस हुन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
झाडापखाला लाग्ने कारण
झाडापखाला लाग्ने मुख्य कारण पानी नै हो । असुद्ध खानेपानीमा विभिन्न ब्याक्टेरिया, भाइरसहरु मिसिएको हुन्छ । विना फिल्टर र नउमाली पानी पिउँदा झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
दोस्रो कुरा हामीले खाने खानाबाट पनि झाडापखाला लाग्न सक्छ । नेपालीले खाने खानेकुराहरु मिश्रण भएको पाइन्छन् । यति मात्रै होइन विभिन्न खानेकुराहरुमा केमिकल पनि राखिएको हुन्छ जुन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । यस्ता खानेकुुराले सधैँभरी झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
अहिले मौसमी रुघाखोकी र झाडापखाला लाग्ने समय पनि भएको छ । गर्मी मौसममा पानीपुरी खाने चलन छ । सेकुवा खाइन्छ र केक पनि खाइन्छ । यस्ता कुराहरुले गर्मी समयमा झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ । केकमा झन् धेरै ब्याक्टेरिया बस्ने भएको हुँदा यस्तो खानाबाट फू्रड पोइजन भएर झाडापखाला लाग्ने सम्भावना हुन्छ ।
गर्मी मौसममा शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता कम हुन्छ । जसले गर्दा सामान्य कुरामा ध्यान नदिँदा (जस्तै धुलो धुवाँ,फोहोरको कारणले) झाडापखाला लाग्ने जोखिम हुन्छ ।
झाडापखाला भएको व्यक्तिले पिसाब गरेको छ भने शरीरमा झोल पदार्थ छ भन्ने बुझिन्छ । पिसाब नभएको खण्डमा झोल पदार्थ नभएको बुझ्नु पर्दछ । पिसाब नभएको खण्डमा पानी र झोलिलो खानेकुरा खुवाउन आवश्यक हुन्छ । झाडापखालाबाट बालबालिका तथा वृद्धावृद्धहरुमा धेरै जोखिममा हुन्छन् ।
गर्मीयामको समयमा पानी पर्ने मौसम जेठदेखि भदौ महिनासम्म झाडापखालाको जोखिम बढी हुन्छ ।
हैँजा र झाडापखालामा धेरै फरक छ । हैँजा हुँदा दिनमा शरीरबाट ३० देखि ४० लिटर पानी जान्छ । यति धेरै पानी जादा मानिसको शरीर एकै छिनमा सुक्छ, समयमा उपचार नभएको खण्डमा मानिसको मृत्यु पनि हुन सक्ने खतरा हुन्छ । हैँजाको कारणले पखाला लाग्दा चौलानी जस्तो पानी सँगै वान्ता हुन्छ । समयमा उपचार तथा रोकथामको विधि नअपनाएको खण्डमा हँैजाले छोटो समयमानै मानिसको ज्यान समेत लिनसक्छ ।
प्रशस्त झोलिलो कुरा आवश्यक
झाडापखाला लाग्नु भन्दा लाग्नै नदिनु उत्तम उपाय हो । हामीले सामान्य कुरालाई ध्यान दिन सकेको खण्डमा झाडापखाला लाग्नबाट बच्न सकिन्छ । जस्तै बाहिरको काम सकेर घर फर्किँदा, शौचालय गएपछि, फोहोर बस्तु छोएपछि साबुन पानीले हातखुट्टा मिचिमिची धुने गर्नुपर्छ । खुल्ला ठाउँमा दिशापिसाव नगर्ने, सफा पानी पिउने, सकेसम्म पानी उमालेर पिउने गर्दा रोगबाट बच्न सकिन्छ ।
झाडापखाला लागेपछि जीवनजल पानी खुवाउनु पर्छ । यदि जीवनजल नभएको खण्डमा एक चिम्टी, नून, एक मुठी चिनी र एक लिटर पानी घोलेर खुवाउने हो भने पनि केही हदसम्म झाडापखालालाई रोक्न सकिन्छ । झाडापखाला लागेपछि जीवनजल पानीसँगै अरु झोलिलो खानेकुराहरु दाल, फ्रेस जुस ,नरम खाना खुवाउनु पर्दछ ।
धेरै नेपाली झाडापखालाको शिकार बन्नुको प्रमुख कारण सरसफाईमा ध्यान नदिनु नै हो ।
काठमाडौँ तथा शहरी क्षेत्रको हकमा कुरा गर्ने हो भने बाहिरबाट आएर बस्ने धेरै नागरिक छन् । पानीको सुविधा राम्रो नभएको र पानी उमालेर खाने बानीको विकास नहुँदा झाडापखाला लाग्ने जोखिम हुन्छ । नेपालको शहरी क्षेत्रमा पानी अभावनै झाडापखालाको प्रमुख कारण देखिन्छ । अब गर्मीयामका समयमा लामखुट्टेबाल लाग्ने विभिन्न रोगबाट पनि बच्न जरुरी छ ।
झाडापखालाबाट बच्न के गर्ने ?
— बाहिरको खानेकुरा नखाने ।
—सरसफाईमा ध्यान दिने ,घरको वरिपरी फोहोर नबनाउने
—पानी उमालेर खाने बानी बसाल्नु पर्छ । उमाल्न नसकेको खण्डमा सफा पानी (जस्तै घाममा राखेर वा फिल्टर गरेर खाने ) पानी ६० डिग्री सेल्सियस उमालेर खाँदा ब्याक्टेरियाहरु मर्छन् ।
—बाहिरको सडेगलेको खानेकुरा नखाने ।
— हरियो सागसब्जी राम्रोसँग पखालेरमात्र खाने ।
—बासी र झिँगा भन्केका खानेकुरा नखाने।
— दिशापिसाब शौचालयमा मात्रै गर्ने
चीनमा भेटिए अत्यन्त खतरनाक प्लेगका बिरामी, एक समय युरोपमा यो रोगले ५ करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो
सँगै बास बसेकी युवतीको मृत्यु भएपछि मोडिएको यात्रा
नोबेल हस्पिटलका उत्कृष्ट २० कर्मचारी पुरस्कृत, २७ विद्यार्थीलाई सम्मान
मधुमेह दिवसः अल्का अस्पतालमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
दाङमा उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा रणनीति तयार
जोसे मोरिन्हो टोटनह्यामको नयाँ म्यानेजर नियुक्त
एडीबीको समीक्षा बैठकः परियोजनाहरुको वित्तीय प्रगति अपेक्षा अनुरुप भएन
सिटी एक्सप्रेसको ‘लखपति एक्सप्रेस’ योजनामा गोबिन्द बहादुरले जिते एक लाख
जाडोका लागि सिजीले ल्यायो घरायसी सामाग्री
सन्दकपुर गाउँ पुगेर रोमान्टिक बने पुजा र पल
अर्घाखाँची कार दुर्घटनाले चुँडेको सपनाः सैनिक बन्न हिँडेका विनोद अस्पतालको शैयामा